Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Rabshadaha Ka-hortagga Vax-ka Rabshadaha wata ee Istuudiyaha BBC London
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Mudaaharaadayaasha Ka-hortagga Vax-da Rabshadaha wata oo Duufaan ku haya Istuudiyaha BBC London
Dibad -baxayaashu waxay rumaysan yihiin in hoggaanka dalku uu la jaan qaadayo shirkadaha dawooyinka iyo warbaahinnada si ay u khiyaaneeyaan dadweynaha Ingiriiska cudurka iyo tallaallada labadaba.
Dibadbaxayaasha ayaa weeraray Istuudiyaha BBC ee London.
Dibadbaxayaasha ka hortagga COVID Pass ayaa isku dhacay booliska London.
Dadka reer London ayaa ka mudaaharaadaya soo saarista baasaboorada tallaalka iyo tallaalka carruurta.
Kooxda gardarada ah ee ka soo horjeedda COVID-ka-gudbayaasha ayaa weeraray oo isku dayay inay gudaha u galaan BBC istuudiyaha Xarunta Telefishinka ee Galbeedka London.
Dadweynihii rabshadaha watay ee reer London ee ka soo horjeeday qorshayaasha COVID-19 ee dowladda ayaa isku dhacay booliska, iyagoo isku dayaya inay xoog ku galaan dhismaha.
Iska horimaadka aadka u ba’an ee ka dhacay iridka istuudiyaha BBC -da waxaa duubay goobjoogayaal goobta joogay. Muuqaalku wuxuu muujinayay daraasiin ama dhowr ka tirsan bilayska Metropolitan oo ku ordaya inay joojiyaan mudaaharaadayaasha, kuwaas oo u muuqday inay damacsan yihiin inay xoog ku soo galaan.
Xanaaq ayaa kacay markii xubno ka mid ah kooxda mudaaharaadka ay markaas booliiska hortiisa ku xidheen silsilad bini’aadam, iyaga oo u sheegayay dadka kale ee mudaaharaadayay inay safka galaan. Dadkii badnaa, oo si degdeg ah u koray tirooyin, ayaa bilaabay inay ku dhawaaqaan, “Ceeb ha ku ahaato!”, Laakiin waxay ka gaabsadeen inay isku dayaan inay mar kale gudaha galaan. Carruur faro ku tiris ah oo ka dambaysay dadkii badnaa ayaa ku biiray heesta.
The Bilayska Metropolitan ayaa sheegay inay "ka war hayaan koox mudaaharaadayaal ah" oo ka baxsan istuudiyaha BBC -da ee Wood Lane, White City.
"Ma jirto cid la xiray, laakiin askartu way joogaan waxayna sii wadi doonaan inay la socdaan xaaladda," ayuu yiri afhayeenka booliiska.
BBC -da ayaa sheegtay inaysan ka hadli doonin arrimaha ammaanka. Muuqaallo toos ah oo laga soo duubay goobta ayaa muujinayay dad ku jira dhismaha oo miisaska dhinac dhigaya qaar ka mid ah albaabada qufulan, kuwaas oo mudaaharaadayaashu u qaateen isku day ay ku doonayaan inay ku xiraan albaabada laga soo galo.
Banaanbaxayaasha ayaa kalsooni darro ka qaba sida ay dowladdu ula tacaaleyso masiibada Covid-19-gaar ahaan soo saarista baasaboorada tallaalka iyo tallaalka carruurta. Waxay rumaysan yihiin in hoggaanka dalku uu la jaan qaadayo shirkadaha dawooyinka iyo warbaahinnada si uu u khiyaaneeyo dadweynaha Ingiriiska cudurka iyo tallaallada labadaba.
BBC-da ayaa sida muuqata lagu tilmaamay inay tahay warbaahin ay dadweynuhu maalgeliyaan-taas oo, sida mudaaharaadayaasha, ay u dhaqmeyso danta dowladda halkii ay ka ahaan lahayd dadka Ingiriiska.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 31
Pete currier wuxuu leeyahay,
Ogosto 10, 2021 markay tahay 21:07
Macluumaadka khaldan iyo jaahilnimadu waxay ku badan yihiin intarneedka haddana dadku waxay weli u qaataan waxay akhriyeen inay run yihiin. Xaalad aad u murugo badan oo aan ku aragno waayadan dambe.